» सुनले बनेको पहिलो पाँचतारे होटल (भिडियो)
१९ श्रावण २०७७, सोमबार १७:४२
मकवानपुर, १९ साउन । सुनै सुनले बनेको पहिलो अनौठो पाँचतारे होटल भियतनाममा खुलेको छ । यो कसरी बन्यो ? यसमा समय बिताउन कति खर्च लाग्छ ? हेर्नुहोस् यो अचम्मको भिडियो–
सुनले बनेको उक्त होटलका कर्मचारीहरूले पहिरनसमेत रातो तथा सुनौलो रङको लगाउँछन् । उक्त होटलको छतमा इन्फिनिटी पुल बनाइएको छ । उक्त पोखरीको बाहिरी पर्खालमा लगाइएका इँटाहरूमा पनि सुनकै लेपन गरिएको छ । डोल्से हनोइ गोल्डेन लेक होटलको निर्माण सन् २००९ मा सुरु भएको थियो । सुनले बनेको यो होटलमा गएर रात बिताउनका लागि गोजीचाहिँ गरम नै चाहिने रहेछ । होटलमा एक रात बिताउन कोठाको न्यूनतम शुल्क ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम रहेको छ । त्यस्तै डबल बेडरुम सुइटको एक रातको १ लाख १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्दछ । होटलमा कल ६ प्रकारका कोठाहरू तथा ६ खाले सुइटहरू छन् । होटलको सबैभन्दा महँगो सुइटको रुपमा रहेको प्रेसिडेन्सियल सुइटमा एक रात बिताउनका लागि ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम तिर्नुपर्छ । अचम्मको कुरा ।